Cashada Kirismaska ​​ee Cuba | Safarka Absolut
La maraweyn Waa wakhti aad u qaas ah oo aan ku maqnaan lahayn guriga, safar, fasax. Shakhsiyan, waxaan jeclahay inaan fasaxa ku qaato dal kale, dhaqan kale. Waxaad had iyo jeer u nooshahay si ka duwan. Marka, maanta, waxaan isweydiineynaa sida Kirismaska ​​loogu noolaado Kariibiyaanka iyo waxa Cashada Kirismaska ​​ee Cuba.
Cuba waa wadan leh dhaqan Masiixi ah, sidaa darteed waxaan hubaal ka heli doonnaa dhaqamo aad ugu eg kuwa Isbaanishka. Ama maya? Aan aragno.
1 Masiixiyada Kuuba
2 Kirismaska ​​Cuba
In kasta oo ay jasiiraddu ka jirto xorriyad diimeed oo weyn, haddana gumaysigu wuxuu reebay raad weyn oo Masiixi ah. Si kastaba ha noqotee, ganacsiga addoonsiga ee ka socda Afrika ayaa sidoo kale soo saaray xiiso iyo syncretism diineed oo weynMarka jasiiraddan waxaa ku badan diimaha Afrikaanka.
Tan waxaa loo arkaa, tusaale ahaan, ku dhaqanka santeria, caqiido Afro-Cuban ah oo xilliyadii gumaysiga ragga iyo dumarka laga keenay Afrika ay ku khasbanaayeen inay ku gabbadaan dhuumashada.
Maanta, dabcan, sidaas maahan kiiska, Santeria-na waxay la nooshahay Katooliga. Kaniisaddu waxay leedahay a 60% dadka Cuba waa Katoolik. Waxaa sidoo kale jira Brotesant, kaniisado kala duwan, Muslimiin, Yuhuud, iyo Buddhist, kaliya si loogu magacaabo caqiidooyinka ugu muhiimsan.
Sidoo kale waa run in laga bilaabo dhaqankii diinta ee Kacaankii Kacaanka waa la xadiday wixii markaa ka dambeeyayna ma ahayn wax aad u fudud in lagu dhaqmo diin kasta. Si tartiib tartiib ah, markii laga soo gudbay tobaneeyo sano iyo isbadalada adduunka, xaaladani way is badalaysay waxaana jiray wax la hubo dib-u-heshiisiin u dhexeysa Gobolka iyo Kaniisadda Katooliga gaar ahaan iyo guud ahaan diimaha.
Markaad ka fikirto tirada Kirismaska ​​aad u dabaaldegtay, tirada qurxinta, geedaha, laydhadhka iyo hadiyadaha aad noloshaada ku aragtay ... waxaad is waydiinaysaa sida ay tahay Kirismas-ka Cuba waa wax dabaaldegyo dhow dhow dhacay. Iyo haa, waa Sababtuna waxay la xiriirtaa waxa aan ku hayno qaybtii hore. Muddo dheer diinta ayaa ahayd, haddaanay xaaraan ahayn, haba yaraatee laguma dhiirrigelin.
Runtu waxay tahay in dadka reer Cuba badankood aysan dan ka lahayn ama aan waxba ka jirin xafladaha diineed ee dhammaadka sannadka. Xitaa waxaa jira kuwa iyagu waliba wax yar ka xanaaqsan in in muddo ah qaybtaan Kirismaska ​​ahi ay joogaan oo ay tahay a dhacdo ganacsi diin ka badan. Labadaba.
Kirismaska ​​ee dunida galbeedku hadda maahan oo keliya daqiiqad kulmid, wadaagid kan kale iyo dareenno wanaagsan iyo wanaag. Waqti badan ayaa laga joogaa tan iyo markii ay soo martay hadiyado, kharashyo, wax iibsi ... iyo Cuba waxa ka yar inta badan waa lacag. Marka, waxaa jira xaflad macaamilku kugu riixo inaad dabaaldegto laakiin lacag uma haysatid. Isleeg xun.
Laakiin ma qalad baa in kirismas lacag la’aan lagu qaato? Dabcan maya, waa inay had iyo jeer sidaa noqotaa, haddaad i weydiiso. Marka maxaa fiican oo ku jira Ciida Kirismaska ​​ee Cuba waxay ku saabsan tahay isu imaatinka qoyska oo wakhti qaata wakhti qaali ah la qaadata kuwa aad jeceshahay iyo asxaabta intii aad masayrka hadiyadaha is weydaarsan lahayd. Marka hadaad raadineyso a Ciidaha ganacsiga, Cuba waa meesha la tilmaamay.
Waa in la dhahaa Maanta waxaad jidadka ku arkeysaa ruuxi kirismas ka badan, oo leh qurxin iyo waxyaabo. Tusaale ahaan, Calle Obispo caan ah ama Old Havana guud ahaan jaangooyooyinku waa laalaadaan ama geedaha kirismaska ​​iyo kuwa barafka wata ayaa ka muuqda dukaamada. Bannaanka halkan, waa dhif iyo naadir in la arko qurxinta oo aan lagu xusin socod ama xaflado iftiiminaya laydhadh midab leh. Isweydaarsiga salaanta deriska? Ama.
Dadka qaarkiis waxay dhigtaan geedka kirismaska ​​guryahooda laakiin ma jiri karaan hadiyado hoostooda iyo hadiyado ay is dhaafsadaan. Dabcan, qofkii geed leeyahay wuxuu leeyahay qabaal. Ma arki doontid Santa Claus meelna, mana maqli doontid heesta Kirismaska ​​ama ma arki doontid kaararka kirismaska. Marka laga soo tago lacagta wax kale lagu bixiyo, wax caado ah ma jiraan.
Sidoo kale, inkasta oo ay tahay ciidda Kaatooliga / Masiixiyiinta kuwa ku dhaqma Santeria badiyaa maalmahaas qoyskooda ayey la qaataan. In kasta oo xaqiiqda ah in maanta diinta iyo dawladdu aysan dagaallamaynin, runtu waxay tahay in kaatooliggu uusan awood u lahayn inuu ku soo laabto tiradii aaminka ahayd ee uu haystay Kacaankii ka hor, mana haysto lacag loogu talagalay xafladaha, dhacdooyinka iyo kuwa kale, sidaa darteed dabbaaldegga waxaa caadi ahaan lagu soo koobay cuntada iyadoo qoyska iyo carruurtu aysan aadi doonin dugsiga.
Maalinta ugu muhiimsan waa Sannadka Cusub, oo aad uga badan Kirismaska, si fudud maxaa yeelay marwalba waa loo dabaaldegaa weligoodna lama mamnuucin. Kadib, adduunka Masiixiyiinta ah, xilliga ugu muhiimsan waa ciidda masiixiga, sida ay uga dhacdo dalal kale oo badan oo Latin Amerika ah. In ka badan December 25, habeenka 24aad waa xilliga reerku ku midoobo oo wuxuu ku raaxaysan a Cashada Kirismaska ​​ee Cuba.
Casho waa cunno Cuban dhaqameed iyo saxanka ugu caansan waa hilibka doofaarka. Haddii qoysku ballaaran yahay, xitaa xayawaanka oo dhan waa la kariyaa oo badanaa waa la cunaa beero la shiilay, khudaar iyo bariis. Waxaad kaloo cuntaa doofaarka nuuga, hilib doofaar dubay bariis iyo digir madow, plantain, croquettes ...
Wixii macmacaan ayaa u muuqda bariis ama baradha barandho macaan, flanmararka qaarkood qaar keega shukulaatada si fiican loogu rusheeyey rum, xanta aan la cabin. Asal ahaan waxay ku saabsan tahay xaflad, in la isu yimaado, wax la cuno, la cabo, la ciyaaro, ciyaaro ciyaaro xiiso leh iyo in la hoydo habeenkii.
Maxaa dhacaya haddii, hadday jiraan hadiyado, waxaa la furaa wixii ka dambeeya 12 habeenimo. Marka wax waliba waxay bilaabmayaan 9: 10 fiidnimo iyadoo la cunaayo, oo ay ku xigto macmacaan, muusig iyo wada hadal, waxayna dhamaanaysaa mararka qaarkood subaxa kadib furitaanka hadiyadaha oo ay sii wadaan kulanka.
Laakiin miyaanay jirin nooc ka mid ah dabaaldegyada caanka ah? Haa, Parrandas. 24-ka Diseembar ayaa la xusaa Xisbiyada, laakiin iyagu kuma xirna Kirismaska, waxay ku dhacaan oo keliya habeenka Kirismaska ​​ka dibna waxay noqdaan kuwo caan ah. Kuwa ugu caansan waa Parrandas de Remedios, oo leh rashka iyo wax walba. Wayna qurux badan yihiin, sidaa darteedna sidaas UNESCO ayaa ku soo daray liistadiisa Dhaxalka aan la taaban karin ee Aadanaha.
Sida aad aragto, Kirismaska ​​maahan waqti xun oo safar loogu aado Cuba. Adduunku ma istaago, sida meelaha kale, ma ahan ganacsi laakiin waa mid bulsho. Cashada Kirismaskuna waa mid dhaqameed marka haddii aad nasiib u yeelato inaad la wadaagto reer Cuba waxaad si fiican u cuni doontaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Cashada Kirismaska ​​ee Cuba
Xilliyada barafka Kanada